Waa tan sida sixirroolayaasha reer Benin ay uga hormarayaan Wadaadka Makosso - teles relay
Mar aan sii fogeyn, qoraal uu soo dhigay baraha bulshada, Wadaadka reer Ivorian Wadaadka Camille Makosso wuxuu ku sheegay inuu u imanayo Benin si uu ula dagaallamo xoogagga suufiyada ah ee halkaas jooga.
Nacayb dartiis, kumanaan wadaaddo ah ayaa diiday inay aadaan Benin (Tell) U sheeg dhakhaatiirta sixirka iyo saaxiradda ah ee Benin in janankii Ilaahay u imanayo inuu ku dhawaaqo dhimashadooda., Ayuu qoray Makosso.
Hadal dhaliyey falcelinno badan oo ay ka mid yihiin kii farshaxameeyaha reer Benin ee Kmal oo sameeyey "Aabaha caruurta" in wareeggiisa uu noqon doono kii ugu dambeeyay ee uu isku dayo.
Hadalkan Kmal, dad badan ayaa ugu yeeray hanjabaad, laakiin waa ka fog yihiin. Maaddaama uu yahay reer Benin, kuna dhashay xaqiiqooyinka dunidan qarsoodiga ah, slammer wuxuu dhab ahaantii isku dayayay inuu badbaadiyo maqaarka wadaadka reer Ivorian. Kii iimaankiisu ka gariiri karo markuu arko bowdyaha iyo badhida aragga.
Xaqiiq ahaan, Wadaadka Ivorian Wadaadka Camille Makosso duruufo kasta ha ku fulin karaan a Muujinta awoodda oo ay weheliyaan xoogaga suufiyada ah ee reer Benin. Sababta Qofka laftiisu wuxuu xaqiijiyay inta lagu jiro warbaahin dhowaan la sii daayay iyada oo aan ogeyn.
Martida barnaamijka "Eedeysane, istaag" oo laga sii daayay Trace FM Sabtigan, Noofambar 21, Makosso wuxuu qirtay, dhab ahaantii, inuu khiyaameeyay xaaskiisa marxuumad Tatiana Kossérė, ka dib markii ay ku weerartay nebiyaddii Christ-Tamaya su'aal la xiriirta xaasas badan.
Waxaan aqaan in ka badan 200 oo haween ah. Xaaskeyga, waxaan ku khiyaaneeyey iyada oo gabar quruxsan oo isku dhafan. Markii aan arkay bowdyaha gabadha, waan is hayn kari waayey. Tayada bowdadeeda iyo midkeeda dambe ayaa iimaankayga isku dheellitirin oo waan ka soo saaray… Cunugna wuu soo baxay. Hoogay! cunuggu wuu dhintay… Kaligeed maahan. Waxaan qirayaa inaan khiyaanay xaaskeyga ”, ayuu qirtay.
Erayadan, waxaa iska cad inay Camille Makosso ku leedahay daciifnimo gabdhaha qurxoon oo leh bowdooyin sixir ah iyo qallooca sixirka. Marka waxaan la yaabanahay sida uu ula tartami doono uurjiifka ama sixirbararka reer Benin, haddii iimaankiisa gariiri karo galmada caddaaladda ah. Daciifnimo aan shaki ku jirin inay ka faa'iideysan doonaan saaxirrada iyo dhakhaatiirta saaxiradu inay baabi'iyaan oo ay afkooda xidhaan.
Haddii uu sifiican u garanayo Benin sida uu sheeganayo, waa inuu ogaadaa inaysan ahayn wadaaddo kan ka hor imaan kara xoogaggan maqan. Oo waliba layaab leh sababta ay dhammaan dhinacyada diinta ugu wada noolaadaan uguna wada noolaadaan waddankan yar ee Galbeedka Afrika nabad.
Marka Makosso waa inuu qaataa talooyinka farshaxanka reer Benin ee Kmal taladiisa haddii uusan rabin inuu dhammeeyo. "La la'yahay ama in jirkiisa, si nasiib ah, loogu diray sanduuq" ee Ivory Coast. Marka la soo koobo, daawashadani waxay ka dhigeysaa inuu boodhka qaniino, haddii uusan dib u noqon.
Benin runti waa waddan yar, laakiin waxay sii wadaa inay siiso ammaanta dhaxalkeeda dhaqameed taas oo maanta sumcaddeeda ku tilmaamaysa waddan si qarsoodi ah oo khatar ah. Marka… taxaddar, ha rabin inaad la ciyaarto David iyo Goliath Makosso! Sikastaba xaalku ha ahaadee, reer Benin waxay kugu sugayaan iyagoo cagaha adag ku jooga dhulka King Bêhanzin.
Bandhig nabadeed: Affou Kéïta badbaadinta Makosso
Toddobaadka toddobaadlaha ee Grammy Awards: “Abaalmarinta Grammy waa xaflad musuqmaasuq ah! "